नेशनल लाइफको नाफा घट्याे, अरू सूचक कस्ता छन् ? - Arthasansar
नेशनल लाइफको नाफा घट्याे, अरू सूचक कस्ता छन् ?
बुधबार, २८ बैशाख २०७९, १२ : १४ मा प्रकाशित
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको २०७८/०७९ को तेश्राे त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त विवरण अनुसार तेश्राे त्रैमाससम्म आइपुग्दा कम्पनीको खुद नाफा २०.७६ प्रतिशतले घटेर २५ करोड ५६ लाख ९ हजार रुपैयाँमा सिमित भएकाे छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३२ करोड २५ लाख ७० हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
समिक्षा अवधिसम्म कम्पनीको बीमा शुल्क भने १७.०४ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब १७ करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनीकाे बीमा शुल्क ८ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख २९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
हाल कम्पनीकाे चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोषमा ५२ करोड ९२ लाख १८ हजार रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ । कम्पनीको जीवन बिमा कोषको आकार २१.९५ प्रतिशतले बढेर ४९ अर्ब ४ करोड ५७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यसैगरी, कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ८ रुपैयाँ ४५ पैसा र कम्पनीकाे प्रतिसेयर नेटवर्थ १२१ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ ।